Surfshark: VPN tsara indrindra ampiasaina amin'ny Android | Androidsis
Ny fampiasana VPN amin'ny Android dia nanjary fahita matetika, ho fomba iray ahafahana mivezivezy mitokana sy tsy manana ahiahy. Ho fanampin'ny famelana anay hihoatra ny karazana fetra ara-jeografika rehetra rehefa mijery atiny amin'ny Internet. Raha te-hivezivezy amin'ny fomba tsara indrindra ianao dia manana safidy vitsivitsy azo atao, ny sasany manana kalitao tena tsara toa ny Surfshark.
Surfshark dia VPN azontsika ampiasaina amin'ny finday Android. Hamela antsika hijerena soa aman-tsara sy tsy miankina amin'ny fotoana rehetra, izay mety ho zavatra mahaliana amin'ny toe-javatra toy ny rehefa mampiasa tambajotra WiFi ho an'ny daholobe na raha miasa amina angon-drakitra mafampana izahay, izay tsy tianay hisy hidiran'ny olona.
Ny fampiasana Surfshark amin'ny Android dia tsotra, satria ny telefaona fotsiny no mila ampidinintsika. Avy eo dia tsy maintsy miditra amin'ity VPN ity isika, mba hahafahantsika mankafy ny fidirana an-tserasera sy azo antoka amin'ny tambajotra amin'ny fotoana rehetra. Ka tsy hanana olana ianao rehefa manamboatra na mampiasa azy.
1 Surfshark Features
2 Ahoana ny fampidinana azy amin'ny Android
Lafiny iray mahaliana ny mpampiasa ny fananana andraikitra maro azo ampiasaina, izay mamporisika ny fampiasana azy. Satria manome fitaovana antsika izy ireo ataovy tsara ny traikefa amin'ny fampiasana an'io VPN, ankoatry ny dingana iray mihoatra ny fampiasa mahazatra izay omen'ny safidy hafa eny an-tsena antsika. Ny sasany amin'ireo fiasa izay ananantsika amin'ny Surfshark dia ireto manaraka ireto:
Fanakatonana fanapahana: Ny Kill Switch dia mampifandray anao amin'ny Internet raha toa ka very ny fifandraisana amin'ny VPN hiarovana ny angon-drakitrao mora tohina amin'ny fotoana rehetra.
CleanWeb: Ity endri-javatra ity dia miaro ny telefaona anao amin'ny doka mpanara-dia, malware na fanandramana phishing rehetra. Afaka amin'ny fandrahonana sy ny olana amin'ity fomba ity.
Whitelister: Safidio ireo rindranasa azonao ampifandraisina amin'ny fampiasana VPN, hahafahanao mivezivezy na manana fidirana amin'izy ireo amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao ny manefy ity lisitra ity isaky ny mila izany.
Fitaovana tsy voafetra: Mampifandray fitaovana betsaka araka izay tianao amin'ny kaonty iray. Tsy mila mivoaka ianao, satria misy fifandraisana tsy manam-petra miaraka avela.
Fampandrenesana farany-to-end: Ampiasaina ny fomba feno indrindra, ka voaaro amin'ny fotoana rehetra ny angon-drakitra. Ny data IPsec / IKEv2 dia voaaro amin'ny kaody maoderina.
Politika henjana 'tsy misy hazo'«: Tsy misy fanaraha-maso na rakitry ny fifandraisana araha-maso amin'ny fotoana rehetra.
Ireto misy sasantsasany amin'ireo fiasa ananantsika amin'ny Surfshark, izay tsy isalasalana fa mamela ny fampiasana tsara an'io rindranasa io amin'ny telefaona. Ny lisitra feno an'ny asany dia azo jerena ao amin'ny tranokalany, hahitanao ny zavatra rehetra vitany. Inona koa, ity VPN dia manana mpizara 1040 mahery, firenena 61 mahery, kontinanta 6. Io dia ahafahantsika misafidy amin'ny fotoana rehetra tsy maintsy ahitantsika ny atiny izay voasakana amin'ny faritra sasany. Tsy hanana olana amin'ity VPN ity isika raha hijery ny atiny mahaliana antsika indrindra.
Ahoana ny fampidinana azy amin'ny Android
Azontsika atao ny misintona Surfshark mora amin'ny finday Android. Ny VPN an'ity fampiharana ity Hita ao amin'ny Play Store izy io, mba tsy hananantsika olana raha ny amin'ny fandefasana azy amin'ny fitaovana. Ankoatr'izay, ny orinasa dia manome APK ho antsika ihany koa, raha tsy mahazo miditra amin'ny magazay fangatahana isika. Ka ny fananana ilay rindranasa amin'ny findainao dia ho tsotra be foana.
Maimaim-poana ny fampidinana Surfshark amin'ny Android, na dia mba hankafizantsika ny asany aza dia tsy maintsy aloa isika. Ny vidiny dia 1,79 euro isam-bolana, izay vidiny sarobidy tokoa ho an'ity VPN feno ity. Ho fanampin'izany, azonao atao ny manandrana azy maimaim-poana, mba hahitana raha zavatra mety aminao izany na manana ny fiasa heverinao fa mahaliana anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Surfshark: VPN tsara indrindra ampiasaina amin'ny Android